आइफालाई बजेट दिनेबारे थाहा छैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको भारतीय इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) समारोह काठमाडौंमा नेपाल सरकारले ‘प्रायोजन’ गर्ने र यसका लागि तत्काल ४४ करोड रुपैयाँ दिनेबारे अर्थ मन्त्रालय ‘बेखबर’ रहेको मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
‘मैले पनि आइफा अवार्डलाई नेपाल सरकारले पैसा दिन लागेको भन्ने पढेर थाहा पाएँ,’ अर्थमन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘पैसा दिनेबारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा आएको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्ड वा महानगरपालिकाले पैसा दिएको भए त्यो सरकारको कुरा होइन ।’
‘नेपाल सरकारले झन्डै १ करोड रुपैयाँ भारतीय फिल्मकर्मीको हितमा दिएपछि कसरी ‘राष्ट्रवाद’ को बचावट गर्न मिल्छ ? यो हाम्रो सफ्ट–पावरको उपयोग हो कि दुरुपयोग ?,’ कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलले मन्त्री खतिवडालाई सोधेका थिए ।
यसैबीच भदौको दोस्रो साता काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको आइफाको २० औं संस्करणमा आउने विशिष्ट पाहुनाका लागि सुविधायुक्त गाडी, होटललगायत सुविधा माग भएको छ । आइफा टिमलाई एक सय लक्जरी कार, होटलका १ सय ‘स्वीट रुम’ माग भएको स्रोतले बतायो ।
प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:०९